Raha sery vitan’anamalaho – Malag@sy Miray
Raha ny any an-tanindrazana jerijerena sy ambenana sahady ireo renirano sy tohadrano noho ny orana manomboka milatsaka [taratramada..com – 12.11.2007]. Ny aty amin’ny firenena tandrefana kosa manomboka tahitahiana ny aina noho ny serisery sy ny kohakohaka madinidinika vokatry ny hatsiaky ny ririnina.
Hoan’ireo tapaka sy namana izay hisedra ireto volana lava mangatsiaka, indro ary fampatsiahivana kely sady maimaim-poana notovozina tamin’ny traikefan’ireo Ntaolo Malagasy, « raha sery vitan’anamalaho ve dia amonoana vatotr’akoho ? »
« Si une soupe de Spilanthes suffit pour soigner le rhume, pourquoi sacrifier la poule pour en faire un bouillon ? » [Anamalaho est le nom générique de plusieurs herbes potagères, Spilanthes connu aussi sous la dénomination de « brèdes mafana »].
« If a soup of spilanthes is enough to cure cold, why sacrifice the hen to make a broth ? »
Satria efa fantatry ny be sy ny maro ihany io ohabolana io dia mety misy fanontaniana any ho any hoe mba inona koa ary no tena antom-pisian’ity lahantsoratra ity ? Voalohany aloha dia efa elaela ihany aho izay no tsy nanoratra teto 🙂 [Fa iny moa angamba dia ahy samirery ka mety tsy dia hahaliana anareo loatra] Ny faharoa indray vokatry ny fahitako fa misy olona manana fahalalana betsaka mpamaky eto amin’ity sehatra ity ka mba mangataka raha mba misy vonona hizara traikefa mikasika « fitsaboana netim-paharazana » ? Tsy voatery ho zava-dehibe fa rehefa fitsaboan-drenibe dia efa izy izay ? Raha toa moa misy manana ity boky manaraka ity dia tena liana ny mba hahita izay voarakitra ao mihintsy raha ny tenako manokana 😉
Boky: « Raha sery vitan’anamalaho » [Fitsaboana netim-paharazana tsotsotra, taloha sy ankehitriny, nangonina araka izay azo natao], Andriantsoa Gabriel, Antananarivo, voatonta tao amin’ny Typo-Express, 1979, 198 pejy.
P.S: Hoan’ireo izay tsy mbola mahalala io ohabolana io dia tsy mety angamba ny misaraka tsy manome fanampim-panazavana akory, ka ny ilazako azy angamba dia ny hoe karazany manome fanazavana ny nambaran’i Harinjaka momba ny fahasarotan’ny fiainana any Madagasikara io ohabolana io hoe : « sitrany ahay » [car il n’y a pas de moindre économie | because there is no lesser economy] 😉
14 novembre 2007 à 8:01
Nisy rakitry ny reniko izay tao amiko tao momba ireny zavatra tsotsotra nefa manampy ny ara-pahasalamana taloha ireny. Hiezaka ny hitady azy aho (tsy dia betsaka ny ao anatiny , fa mino aho ho toy ny mpitari-dalana fotsiny). Indraindray misy karazana zava-maniry voasoratra tao anatin’ilay rakitra, nef tsy fantatro intsony. Havoakako ihany rehefa hitako ary angatahiko manokana izay mahalala ireny karazana-javamaniry ireny mna hanoro hoe inona marina izy io, na izay mety ho anarany ankehitriny.
Misaotra an’i Tomavana nanaitra ny momba an’io.
14 novembre 2007 à 8:02
hadinoo ny nilaza fa efa 91 taona izy vao nodimandry tamin’ny faran’ny 2006 teo
14 novembre 2007 à 9:03
Izaho dia isan’ny mino fa misy fiantraikany amin’ny faharetana amin’ny fahasalamana mihintsy ny fitaizan-tena … indrindra raha zavatra voa-janahary no fampiasa 🙂
14 novembre 2007 à 9:39
Na dia ohatra fotsiny aza ve hoe mihinana vetin’ampango isan’andro? Sa tsy mitovy izany!
Marina indrindra aloha fa mahasalama ny zavatra natioraly e, rehefa tsy mifandimpatra indray!
Raha tsy izany ve ny aty andafin-driaka hiverina @ bio sy hangalatahaka ny fanafody vita avy @ zavamaniry ( ny aloe vera, ny kininina, sns)
14 novembre 2007 à 11:42
Tsy haiko aloha izay vokatsoan’ny fihinanana vetin’ampango isan’andro e 😉 ankoatr’izay tena marina tokoa fa mirongatra ny fitrandrahanan’ireo orinasam-panafody tandrefana izay mety ho « fombafomba fitsaboana netim-paharazana » manerana izao tontolo izao.
14 novembre 2007 à 12:03
Saingy tsy nitondra anamalaho 🙂 Ary iny Spilanthes iny indray no mbola tsy hitako a!
Misy boky izay marina hitako teo, momba ny zavaboary avy amin’ny zava-maniry izay ampiaisana hitsaboina. fa saingy tsy tadidiko ilay « titre » sady tsy zaka intsony fa efa nihotra 7 kg ny entako!
Ka faly hamaky momban’io rehefa vonina.
25 janvier 2008 à 5:52
Ity misy fomba iray ho anareo any ampita any hitsaboana ny sery. Mampangotraka ail (tongologasy hoy izahay aty an-tanindrazana). Voany vitsivitsy fa tsy atao betsaka dia ny ranony no sotroina. Azo atao koa ny mihinana azy manta fotsiny izao. Izy aloha dia misy ilay fofona efa haintsika iny saingy raha handroaka aretina dia ihafiana kely. Mila mitandrina anefa ireo manana tosi-drà ambany mba tsy hihinana be loatra azy io. Iny kasinga mitondra ilay fofona aminy iny mihitsy hoy ny mpikàroka no manohitra ny otrik’aretina mitondra sery.
Samy manohitra sery, na io tongolo io, na ny ron’akoho izay fanaon’ny Ntaolo (ny mpikaroka daholo no nanaporofo ireo). Ary dia hita araka izany fa tena nànana fahalalàna sy fahaiza-nandinika tokoa ny razamben’ny Malagasy
P.S: Tsikaritry ny rehetra angamba fa miezaka foana aho mametraka tsindrim-peo eny amin’izay eritreretiko tokony hasiana izany, nisy tamin’ireo nàmana any Frantsa mantsy nangàtaka manokana azy io mba hianàrany tsara ny teny Malagasy, hono, indrindra fa ny fanononana azy. Ny mametraka ilay tsindrim-peo eo ambonin’ny « o » toy ny eo amin’ny hoe « fanononana » sy ny « i » no olako kely.
25 janvier 2008 à 13:12
Misaotra an’i Avylavitra fa tena vaovao tamiko indray iny tongologasy iny 😉
misaotra miresaka ny momba ny fitaizan-tena amin’ny fomba amam-panao entin-drazana rehetra.
Tsindriko kely etona ny momba ireo zava-maniry mampitombo hery hanosehana otrikaretina amin’ny hatsiaka:
– Tongolo egypta na tongolo be (oignon)
– Choux verts ou rouges
Izany no hahitana matetika « SOUPE DE POIREAUX, d’OIGNONS » na « veloute de poireaux, d’oignons » rahefa « HIVER » ka mandeha any amin’ny restaurant na auberge any Eropa !
Sy ny soupe aux choux any Rosia, Siberia…
Ny ail indray dia TENA SARO-PADY mihintsy satria matetika ny olona manao HYPOTENSION ARTERIELLE dia MILA MITANDRINA fa MAHERY BE NY TONGOLO AIL !
Fa tonga dia tankina tsy miaina mihintsy na tongolo kely iray aza no hanina ! Koa tandremo e !
Ho an’izay mipetraka aty Eropa dia misy « ail sauvage » atao koa hoe
« AIL DES OURS » tena tsara io ! Tsara hanina mandritra ny « hiver » hatao purée hanaovana tartines amin’ny mofo fa MATSIRO BE !
Fitaizana tena ho an’ny olona rehetra io mba tsy ho voan’ny hypertension artérielle sy mba tsy mora handairan’ny otrikaretina !
Mitovy asa amin’ny PROPOLIS koa !
Fomba fanalana ny fofon’ny tongolo ail dia MIHINANA PERSIL (feuilles de persil frisé) –
PERSIL FRISE dia ilaina hanaovana tisane ho antsika vehivavy marary kibo, lamosina sns… alohan’ny ho tonga fotoana (douleurs pré-menstruelles)
Raha toa ka adinonao ny manao « tisane de persil » dia ASIO « BOUQUET DE PERSIL LEHIBE » ao anaty soupe dia vita (sady matsiro no manitra no mahasalama) !
Momba ny BIEN-ETRE FEMININ dia ireto no ilaina:
– Onagre (huile) 1comprimé/Jour
– Tisane de feuille de sauge
TANDREMO AZA OMENA sauge be ny lehilahy fa natao ho an’ny vehivavy io sao lasa « vavy vavy » eo ry zalahy e ! (marina io fa tsy vazivazy e !
Maro dia maro ireo momba ny fomba fitaizan-tena fa ireo aloha no ilain’ny vehivavy fa ny « ail » tandremo an !
Misaotra anao Helisoa fa tsy ny Malagasy ihany tokoa no manana fitsaboana netim-paharazana tsotsotra fa ny vazaha koa 😉 misy hotsakotsakoana ireo satria maro tokoa
Tsarahoby Niah Racchita RMNTSOA
its good that what hi3 lolin b!hi3 😮
hono hoa azafady!aiza kay ahitana io huile d’onagre io fa mba mitady. zahay aty dago
Misaotra anareo nizara. Fa inona moa ny sauge amin’ ny teny malagasy?